Sawirro: Sidee ayay banaanbaxyada u gilgileen magaalada Beledweyne | Entertainment and News Site
Home » News » Sawirro: Sidee ayay banaanbaxyada u gilgileen magaalada Beledweyne
Sawirro: Sidee ayay banaanbaxyada u gilgileen magaalada Beledweyne
daajis.com:- Waxaa magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, ka dhacay banaanbax ballaaran oo ay isugu soo baxeen dad ka badan Shan kun oo shacab ahaa.
Dadka isugu soo baxay dibadbaxa ayaa waxaa ku jiray mas’uuliyiin ka tirsanaa maamulka, waxa uuna banaanbaxa gilgilay dhammaan magaalada Beledweyne.
Dadka dhigaayay banaanbaxa ayaa ku qeyla dhaaminaayay ”Alshabaab ha dhacdo, Dhiigyacab doonimeyno, Nabadiid doonimeyn iyo Erayo kale oo ka dhan ah Alshabaab”
Bannaanbaxan oo uu soo qaban qaabiyay Maamulka Gobolka Hiiraan, ayuu ujeedkiisu ahaa inay reer Hiiraan muujiyaan dareenkooda ku aadan, sida ay kaga soo horjeedaan gumaadka ay Shabaabku ku hayaan shacbiga Somaliyeed.
Dhalinta reer Baledweyne oo qaarkood ka hadlay bannaanbaxaasi, ayaa waxay sheegeen in dadkii lagu laayay qaraxii Zoobe, aanay ahayn kuwo ku shaqo leh siyaasad, isla-markaana ay aad uga xun yihiin gumaadka rayidka.
Waxa ay Alshabaab ka dalbadeen inay isaga baxaan dalka oo ay u jihaad tagaan dalalka uu jihaadka ka socdo sida Falastiin, Ciraaq iyo Syria.